Meel kasta oo aad adduunka ka joogto oo aad ka fekereyso barashada injineernimada Afrika, u oggolow maqaalkani inuu kugu hago waddooyinka dhirta iyo jidka jaamacadaha injineernimada ugu fiican Afrika.
Kordhinta khidmadaha waxbaridda ee ardayda caalamiga ah iyo isbeddellada isbeddelka ee dhaqdhaqaaqa waxbarashada adduunka oo dhan, helitaanka qiimaha lacagtaadu hadda kuma koobna daaqa cagaaran ee dibadda laakiin hadda waxaa laga helayaa meel u dhow guriga.
Jaamacadaha Injineerinka ugu Fiican Afrika
15 Jaamacadaha Injineeriyada Sare ee Afrika
# 1 - Jaamacada Djillali Liabes
# 2 - Jaamacadda Qaahira
# 3 - Jaamacadda Pretoria
# 4 - Jaamacadda Johannesburg
# 5 - Jaamacadda Ain Shams
# 6 - Jaamacadda Witwatersrand
# 7 - Universite de Tunis-El-Manar
# 8 - Jaamacadda de Sfax
# 9 - Jaamacadda Alexandria
# 10 - Jaamacadda Zagazig
# 11 - Jaamacadda Tanta
# 12 - Jaamacadda Mansoura
# 13 - Jaamacadda Cape Town
# 14 - Universite de Carthage
# 15 - Jaamacadda KwaZulu Natal
Jaamacadaha Afrika ma ku fiican yihiin injineernimada?
Jaamacaddee ugu wanaagsan injineernimada Afrika?
Tirooyinka ku jira cilmi baarista injineernimada ee Afrika waxay muujinayaan xaqiiqda ah in injineernimada ay ku sii socoto kororka Afrika ayna leedahay awood ay ku sii wadato halka ay marayso koritaanka.
Waxay sidoo kale tilmaan u tahay xaqiiqda ah in jaamacadaha injineernimada ee Afrika ay sii wadaan inay wax soo saaraan iyada oo loo marayo isku dhafka jawi wanaagsan iyo macallimiin khibrad leh, maskax wanaagsan oo dhinaca injineernimada ah.
Jaamacadahaan waxaa lagu qiimeeyay iyadoo lagu saleynayo qiimeynta tilmaamaha injineernimada USNEWS. Tan waxaa ka mid ah injineernimada sumcadda cilmi-baarista adduunka, daabacaadda, shirarka, saamaynta xigashada, xigashooyinka guud, tirada daabacadaha ee 10% ugu badan ee la soo xigtay, iyo iskaashiga caalamiga ah.
Waxaa la abuurey 1da Ogosto 1989 iyadoo lagu soo saaray Wareegto Lambar 89-41 ee 01/08/1989 sida wax looga badalay laguna kabayo Xeerka Fulinta Lambar 95-208 ee 08/05/1995, Université Djillali Liabes Sidi -Bel Abbots waxay heshay maqaamkeeda jaamacadeed 1989 kadib markay ahayd xarun aqooneed waxqabadkeedu ka bilaabmay Algeria 1978.
Waa hay'ad tacliin sare oo dawladeed oo aan faa'iido doon ahayn oo ku taal meel magaalo ah oo ka tirsan magaalada yar ee Sidi -Bel Abbots halkaas oo ay ka kooban tahay lix kulliyadood - Saynis, Sharci, Sayniska Injineeriyadda, Daawada, Sayniska Dhaqaalaha, iyo Bani'aadamka.
Jaamacadda ku jirta 158 ee qiimeynta iskuulada injineernimada adduunka, waxay xisaabisaa shaqada cilmi baarista oo ka mid ah kuwa ugu sarreeya 1% ee waraaqaha injineernimada aadka loo xusay.
Jaamacaddan oo ay la baxeen magacyo badan oo kala duwan ayaa ah jaamacadda guud ee Masar. Waxay ku leedahay xarunteeda ugu weyn Giza waxayna isla markiiba ka gudubtaa webiga Niil oo ka imanaya Qaahira.
Jaamacadda waxaa la aasaasay 21-kii Diseembar 1908 waxayna ku bilaabatay kulliyadda farshaxanka ka dib markii ay isku dhistay xarunteeda weyn ee hadda ku taal Giza bishii Oktoobar 1929.
Jaamacadda Qaahira waxay ku jirtaa 264 qiimeynta iskuulada injineernimada adduunka waxayna sumcad ku heshay wareegyada caalamiga ah barnaamijyadeeda Farshaxanka iyo Aadanaha, Injineerinka iyo Teknolojiyadda, Sayniska Nolosha iyo Daawooyinka, Sayniska Bulshada iyo Maareynta.
Waxaa la aasaasay 1908 oo ah xerada Pretoria ee Jaamacadda Transvaal University, Jaamacadda Pretoria waa jaamacad cilmi-baaris dadweyne oo badan ku leh Pretoria. Jaamacadda waxaa loo abaabulay sagaal kulliyadood iyo iskuul ganacsi
Laga soo bilaabo 1997, jaamacaddu waxay soo saartay wax soo saar badan oo cilmi baaris ah sanad kasta marka loo eego machadyada kale ee tacliinta sare ee Koonfur Afrika, sida lagu qiyaasay Waaxda WaxbarashadaHeerka Aqoonsiga.
Jaamacadda Pretoria waxay kujirtaa 286 qiimeynta iskuulada injineernimada adduunka sidoo kale waxay kamid tahay tobanka ugu sareysa iskuulada Afrika.
Waxaa la aasaasay 1-dii Janaayo 2005 natiijada ka soo baxday isku-dhafka u dhexeeya Jaamacadda Rand Afrikaans (RAU), Technikon Witwatersrand (TWR), iyo xarumaha Soweto iyo East Rand ee Jaamacadda Vista, Jaamacadda Johannesburg waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn ee lala xiriiro. Koonfur Afrika iyo guud ahaan Afrika.
Jaamacadda Johannesburg waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay midda labaad ee ugu xoogga badan, Jaamacadda Johannesburg waxay bixisaa barnaamijyo heer caalami ah, oo caalami ah oo la aqoonsan yahay oo ku saleysan manaahijta lagu wargelinayo horumarka ugu hooseeya ee labada tacliin sare iyo tan sare, iyo in loogu talagalay in loogu diyaariyo ardayda adduunka shaqada iyo dhalashada adduunka.
Jaamacadda Johannesburg waxay kujirtaa 392 qiimeynta iskuulada injineernimada aduunka, hada waxay kujirtaa 7th jaamacadaha Afrika, 5aad Koonfur Afrika, waxayna kujireysaa gudaha 2.3% ugu sareysa jaamacadaha aduunka sida lagu daabacay QS World University Rankings 2017/2018.
Jaamacadda Ain Shams waxaa la aasaasay 1950 waxayna ku taal Masar. Jaamacadu waxay bixisaa labadaba barnaamijyada shahaadada koowaad iyo kan sareba waxayna leeyihiin toddobo goobo xarumood. Afarta waxay ku yaalliin Alabassya, laba waxay ku yaalliin Heliopolis, iyo mid ku yaal Shubra Elkheima.
Ujeeddada jaamacaddu waa “diyaarinta qalin-jabiyayaasha sharafta leh ee awood u leh inay la jaanqaadaan horumarka xagga teknoolojiyadda adduunka ee dhinacyada kala duwan ee buuxiya baahiyaha suuqyada maxalliga ah iyo kuwa gobollada waxayna sameyn karaan cilmi baaris cilmiyeed waxayna ku dabaqi karaan abuurista xaalado ku habboon.”
Jaamacadda Ain Shams waxay kujirtaa 467 qiimeynta iskuulada injineernimada aduunka waana mid kamid ah hay'adaha ugu wanaagsan ee cilmi baarista injineernimada qaybtaan kamid ah aduunka.
#6 - Jaamacadda Witwatersrand
Jaamacadda Wits sida caadiga ah loo yaqaan waxaa la aasaasay 1896 waxaana loogu magac daray Iskuulka Macdanta ee Koonfur Afrika ee Kimberly. Jaamacadu waa jaamacada sadexaad ee ugu da'da weyn South Afrika hawlgal joogto ah.
Jaamacaddu waxay qaybteeda ku biirisay guusha Koonfur Afrika sida ay hadda tahay iyo adduunkaba, maadaama ay ku jirtay dagaalkii labaad ee adduunka ay ka qayb qaadatay cilmi baaris ku saabsan adeegsiga raadaarka iyo tababbarka haweenka askarta ah si ay ugu dagaallamaan xoogagga wanaagsan.
Jaamacaddu waxay leedahay 5 kulliyadood, oo ay ka mid yihiin Sayniska, Ganacsiga, Sharciga, Maareynta, injineernimada, sayniska caafimaadka, iyo cilmiga aadanaha.
Jaamacadda Witwatersrand waxay kujirtaa 476 qiimeynta iskuulada injineernimada adduunka waxaana loo yaqaan soo saarista qalin jabiyaasha ugu sareysa.
Waxay ku taal Tunis, Tunisia, Jaamacadda Tunis El Manar waxaa la aasaasay sanadkii 2000 waxayna ka shaqeysaa 11 kulliyadood. Universite de Tunis-El-Manar waa jaamacadda ugufiican dalka Tunisia waxayna kamid tahay 1000ka iskuul ee aduunka ugu sareeya.
Jaamacadda Tunis El Manar waxay kujirtaa 488 qiimeynta iskuulada injineernimada aduunka waxaana lagu yaqaanaa tayada wax soo saarkeeda.
Jaamacadda Sfax oo ku taal Sfax, Tunisia, Jaamacadda Sfax waxaa la aasaasay 1986 iyadoo la adeegsanayo magaca Jaamacadda Koonfurta waxayna hadda ka kooban tahay shan kulliyadood oo cilmi-baaris ah, saddex kulliyadood, laba iyo toban machadyo, iyo xarun cilmi-baaris.
Jaamacadda Sfax waxay leedahay iskaashiyo dhowr ah oo lala yeesho shirkado waaweyn waxayna lashaqeeyaan tacliin ahaan cilmi-baarista iyo barnaamijyada is-weydaarsiga ee jaamacadaha ajaanibta ah ee dalal dhowr ah sida Faransiiska, Kanada, Belgium, iyo Morocco.
Jaamacadda Sfax waxay kujirtaa 488 qiimeynta iskuulada injineernimada adduunka.
Jaamacadda Alexandria waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn dalka Masar, iyo jaamacadda saddexaad oo la aasaasay ka dib Jaamacadda Qaahira iyo Jaamacadda Mareykanka ee Qaahira. Jaamacadda Alexandria waxay leedahay 21 kulliyadood iyo 3 machad oo lagu barto noocyada kala duwan ee bulshada, caafimaadka, injineernimada, xisaabta, iyo sayniska kale.
Jaamacadda Alexandria waxay kujirtaa 508 heerarka iskuulada injineernimada adduunka.
Jaamacadda Zagazig waxaa la aasaasay 1970 iyadoo gacan ka geysaneysa dib u soo nooleynta Masar iyo mowqifkeeda caalamiga ah ee waxbarashada. Waxay ku bilaabatay farac ka tirsan Jaamacadda Ain Shams waxayna ahayd jaamacaddii toddobaad ee laga aasaaso Masar. Waxay leedahay kuliyado beeraha, ganacsiga, caafimaadka xoolaha, dawada dadka, waxbarashada, iyo sayniska.
Waxay siisaa ardaydeeda shahaadada bachelorka iyo mastarka iyo dibloomooyin waxayna leedahay kulliyadaha maadooyinka soo socda: injineernimada korontada, injineernimada farsamada, dhismaha, injineernimada kombiyuutarka, injineernimada, xisaabaadka, maareynta ganacsiga, dhaqaalaha, tirakoobka, sayniska xoolaha, farmasiga, waxbarashada, iyo beeraha. iyo dhirta.
Jaamacadda Zagazig ayaa ku jirta 513 qiimeynta dugsiyada injineernimada adduunka.
Markii hore farac ka tirsan Jaamacadda Alexandria, Jaamacadda Tanta waa jaamacad Masaari ah oo ku taal Tanta oo ku taal gobolka Gharbia. Jaamacadda Tanta waxaa laga soocay Jaamacadda Alexandria 1972 iyadoo lagu soo rogay amar nambarka 1468 ee 1962.
Jaamacadda Tanta waxay leedahay 13 kulliyadood, kuwaas oo kala ah - Caafimaadka, Ilkaha, Farmashiyaha, Sayniska, Ganacsiga, Sharciga, Farshaxanka, Injineerinka, Waxbarashada, Beeraha, Kalkaalisada, Waxbarashada Gaarka ah, Barashada Jirka, iyo Machadka Kalkaalinta Caafimaadka.
Himilada jaamacaddu waa inay abuurto jawi tacliineed oo wax ku ool ah iyada oo loo marayo horumarinta joogtada ah ee barnaamijyada tacliinta ee takhasusyo kala duwan. Jaamacadu waxay kujirtaa 524 qiimeynta iskuulada injineernimada aduunka.
Jaamacadda Mansoura waxay ku taal daanta bari ee wabiga Niil, agagaarka 120km waqooyi-galbeed Qaahira. La aasaasay 1972, Jaamacadda Mansoura waa jaamacad caalami ah oo heer caalami ah sidoo kale waa jaamacadda ugu sarreysa 30 ee QS Jaamacadda Carabta Darajooyinka 2019.
Waxay ka kooban tahay in ka badan 7,000 xubnood oo macallimiin ah oo wax ka dhiga in ka badan 165,000 oo ah ardayda shahaadada koowaad iyo 18,000 ardayda dhigata shahaadada koowaad ee jaamacadeed oo ku kala jira barnaamijyo badan oo shahaadooyin ah, oo ay ku jiraan injineernimada, sayniska, beeraha, caafimaadka xoolaha, daawada, iyo ilkaha. Inta badan shahaadooyinka jaamacadda Mansoura waxaa si buuxda loogu dhigaa Ingiriisiga.
Jaamacadda Mansoura ayaa 528 ka gashay qiimeynta dugsiyada injineernimada adduunka.
#13 - Jaamacadda Cape Town
Jaamacadda Cape Town waxaa la aasaasay 1829 waxayna sanado badan qaadatay calaamadeeda jaamacad cilmi baaris dadweyne iyo hay'adda ugu da'da weyn Koonfur Afrika.
Iyada oo ay weheliso Jaamacadda Stellenboch oo ay Jaamacadda Cape Town labaduba heleen heer jaamacadeed oo buuxa isla maalintaas 1918, Jaamacadda Cape Town waxaa loogu yeeri karaa jaamacadda ugu da'da weyn ee ka jirta Sub-Sahara Africa.
Jaamacadda Cape Town waa jaamacadda ugu sarreysa Afrika ee ku taal QS ee Jaamacadda Adduunka, ka Jadwalka Tacliinta Sare ee Jaamacadda Adduunka, Iyo Jaamacadda aduunka ee Jaamacadda aduunka. Jaamacadda Cape Town ayaa sidoo kale ku jirta 541 qiimeynta dugsiyada injineernimada adduunka.
Jaamacadda Carthage waxaa lagu aasaasay 1988, Jaamacadda Carthage waa jaamacad fara badan oo kaladuwan oo lagu aasaasay iyadoo leh 21 hay'adood oo hal-kormeer ah iyo 12 oo kormeer wadajir ah leh.
Dugsiga injineernimada sare ee Jaamacadda Carthage ee isgaarsiinta, machadkeeda daraasadaha ganacsiga sare, kuliyadeeda sharciga, iyo Polytechnic School of Tunisia ayaa dhamaantood aad looga tixgaliyaa bulshada tacliinta.
Tacliin ahaan, Jaamacadda Carthage waxaa laga aqoonsan yahay jaamacadaha ugu wanaagsan Tunisia iyo Afrika waxayna kujiraan 552 qiimeynta iskuulada injineernimada aduunka.
Iyada oo leh 5 xarumood oo ku yaal gobolka Kwazulu Natal, Jaamacadda KwaZulu Natal waa jaamacadda 15-aad ee liistada ugu sareysa jaamacadaha injineernimada Afrika.
Jaamacadda KwaZulu Natal waxaa la aasaasay 1-dii Janaayo 2004 markii Jaamacadaha Natal iyo Durban-Westville la midoobay.
Jaamacadda KwaZulu Natal oo saldhigeedu yahay ugu horreyn magaalada Pinetown, Koonfur Afrika, ayaa dhiirrigelin ka heleysa Aqoonsigeeda Afrika maadaama ay eryanayso aragtideeda ah inay noqoto jaamacad Afrikaan ah oo hor leh.
Jaamacaddu waxay ka kooban tahay afar kulliyadood, kuwaas oo iyaguna ka kooban dhowr iskuul oo markaa ku kala faafsan xarumahooda.
Maaddaama jaamacaddu ay kaliya bilaabatay jiritaanka 2004, wali ma soo saarin liis dheer oo ah qalinjabiyeyaal caan ah. Jaamacadu waxay kuxirantahay 556 qiimeynta iskuulada injineernimada aduunka.
Waxaa jira jaamacado badan oo sameyn kara liistada jaamacadaha injineernimada ugu sareeya Afrika. Jaamacadaha sida Jaamacadda Assuit, Stellenbosch University, iyo Menofia University sidoo kale waa iskuulo injineernimada wanaagsan.
Maaddaama dugsiyadu sii wadaan inay raacaan waddooyin cusub oo ay ceyrsadaan mustaqbalka injineernimada iyada oo loo marayo barasho iyo iskaashi, mustaqbalka injineernimada Afrika waa mid ifaya.
Haa, waxaa jira dhowr Jaamacadood oo Afrikaan ah oo sifiican uga shaqeynaya qeybta injineernimada Afrika.
Liiskan jaamacadaha injineernimada ugu sareeya Afrika waa ilo wanaagsan iyo hagitaan loogu talagalay kuwa u baahan hagida.
Jaamacadda Djillali Liabes waa jaamacadda ugu fiican injineernimada Afrika. Tani kama qaadanayo jaamacadaha kale ee Afrikaanka ah ee iyagu iska roona.
Liiskan jaamacadaha injineernimada ugu sareeya Afrika ayaa cadeyn u ah sida ay ugu kala sarreeyaan marka loo eego jaamacadaha kale ee adduunka.
Barashada Hagaha Dibadda Post blog
Previous Post:15ka ugu sarreeya Jaamacadda Stanford ee la xuso